Vakaremara Vonyunyuta Zvikuru Munguva yeKuvharwa kweNyika
Vakaremara vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekuwedzerwa kwakaitwa nehurumende nguva yekuti vanhu varambe vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere cheCoronavirus icho chauraya vanhu vakwanda pasi rose pamwe nekuparadza hupfumi hwenyika dzakawanda.
Kunyange hazvo vakawanda vevanhu vakaremara vachitsigira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, rekuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus, kugara vanhu vakazvivharira mudzimba uku kuri kuita kuti vakaremara, avo vanorarama nenzira dzakasiyana siyana, vatadze kuzviriritira.
Mutungamiri wesangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti kumanikidzwa kuri kuitwa vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kuri kusiya nhengo dzesangano ravo dziri parumananzombe, kuburikidza nekushaya cheuviri.
Amai Cherera vanoti kunyange hazvo paine rubatsiro rwuri kupihwa vanhu munguva ino, chokwadi chiripo ndechekuti vakaremara vazhinji havasi kuwana zvinhu zvekuzvidzivirira kuti vasabatwe nechirwere cheCoronavirus, sezvo paine zvipingaidzo zviri kupa kuti vatadze kuwana rubatsiro urwu.
Mumwe wevanhu vasiri kuwana rubatsiro, VaGeorge Mangwiro vekuHatcliff, avo vakaremara uye vachishandisa madondoro, vanotiwo mari dziri kupihwa vanotambura serubatsiro nehurumende kuitira kuti vanhu ava vabatsirike panguva ino,hadzisi kusvika kune vakaremara vakawanda.
Dambudziko riri kusangana naVaMangwiro, idambudziko riri kusanganawo naAmai Pauline Mpotaringwa vekuGlen View, avo vanoshandisa wheelchair pamwe nekupfeka ma pampers.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kuti seyi vakaremara ava vasiri kuwana rubatsiro kubva kuhomwe yemari inoita mazana matanhatu emamiriyoni emadhora, iyo yakaparurwa nehurumende ichinzi ichashandiswa kwemwedzi mitatu, mukubatsira vanhu vanoshaya.
Va Ceedy Chitsiwah, avo vanoshandisa wheelchair, vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya pekubata nekuda kwemaomero akaita zvinhu munguva ino.
"Kumunhu akaremara mabhindauko mashoma, kunyanya usina mari yekuti utange kana kusimudzira projekiti. Ndanga ndichitofunga kuti ma secretarial services ndiwo angaite semunhu asingakwanise kushandisa nhengo dzake dzese dzemuviri. Asi makambani acho nezvikoro zvakavhara," vanodaro VaChitsiwah.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation, VaShingirai Nyakupinda, vanoti kunyange hazvo zvakaoma kudai, vakaremara vakawanda vari kuitawo mabhindauko avanokwanisa, kuitira kuti vararame.
Kushayikwa kwe transport kuri kukanganisa vakaremara vakawanda, asi vamwe vari kungoenda kunohodha zvinhu zvavo pamwechete nevamwe. Mapurisa haasi kuzonyanya kuvashungurudza.
Kudzamara mari yerubatsiro iyi vaibata mumaoko avo, vakaremara vakaita saVaNyakupinda, VaMangwiro nevamwe vavo, vacharamba vachitambura vasina rubatsiro rwavari kuwana panguva iyo hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti iri kubatsira vose vanotambura munguva ino yeLockdown.